Ukusola kukaSofia: phakathi kokuwa koDonga nempi yombango yaseSpain | Izincwadi Zamanje
Udonga lodonga lwe-berlin
Ukusola kukaSofia (2019) yinoveli yomlando eqanjiwe eyenziwe ngumbhali waseSpain uPaloma Sánchez-Garnica. Ukulandisa kuhamba phakathi kwezikhathi ezimbili ezifanele zaseSpain naseJalimane engxenyeni yesibili yekhulu lama-XNUMX. Ngakolunye uhlangothi: uFrancoism ongasekho eMadrid; kokunye: iminyaka ngaphambi kokuwa koDonga lwaseBerlin enhlokodolobha yaseJalimane.
Umbhali waseMadrid usebenzisa leli thuba ukuze ulandise ukuthi yayiyini indima yabesifazane ngemuva kweMpi Yombango yaseSpain. Ngokufananayo, lesi senzo sichaza isakhiwo esithandekayo sezinhloli ezizungeze udonga lukakhonkolo olwehlukanisa imindeni yaseBerlin kusukela ngonyaka we-1961 kuya kowe-1989. Ngaphezu kwalokho, kunendawo yendaba yothando ethokozisayo futhi ejulile ehilela ophikisayo.
1 Isifinyezo sokusolwa kukaSofia
1.3 Izikhathi zomlando
2.1 Yazalwa kanjani indaba kaSofia
2.1.1 Okuhlangenwe nakho kwakho siqu
2.1.2 Ugqozi nezitayela
3 Mayelana nomlobi, uPaloma Sánchez-Garnica
Isifinyezo se- Ukusola kukaSofia
Madrid, 1968; Umbuso wobushiqela kaFranco useminyakeni yawo yokugcina. Lapho, UDaniel noSofía Sandoval bakha umshado ngokuphila okuzolile. Ngakolunye uhlangothi, ungukuphela kwengane yommeli uRomualdo Sandoval, umqondisi wenkampani yabameli edume ngokusondelana ne "Generalissimo." Lesi simo sakha kumyeni izakhiwo ezithile ezisuselwa ekuqhathanisweni noyise.
Ngakolunye uhlangothi, USofia ungowesifazane ohlakaniphe kakhulu, ngamandla amakhulu esayensi (ngaphezu kwalokho, uyise ungusosayensi). Kodwa-ke, yena —Njengabesifazane abaningi bangaleso sikhathi— akanazo izinqumo zakhe. Eqinisweni, noma yiluphi uhlelo lomndeni noma oluyimfihlo luxhomeke ngokuphelele ekuvunyelweni ngumyeni wakho onomqondo olondolozayo.
Umkhuba wansuku zonke we Sofia kanti uDaniel namadodakazi akhe amabili bavela emndenini ocebile ongenazinkathazo eziningi. Kodwa-ke, ekujuleni kwenhliziyo, yena cha lokhu ngokuphelele wanelisekile ngempilo yakhe njengombhangqwana. Ngaphezu kwalokho, lo wesifazane abeke eceleni ukuqeqeshwa kwakhe enyuvesi ukuzinikela kuphela emsebenzini wasekhaya nasekujabuliseni oshade naye.
Konke kuyashintsha ngokuphelele lapho udaniel ethola incwadi kusuka kumthumeli ongaziwa ngolwazi oluphazamisayo ngomama wakhe amthandayo, Itabernakele. Incwadi iveza ukuthi akayena umama wakhe wangempela.... Uma efuna ukwazi iqiniso, kumele aye eParis ngokushesha, ngabo lobo busuku. Futhi, umlingiswa osemqoka uyavela emicimbini elandelayo: UKlaus.
Ukusola kukaSofia ...
Ngaphambi kokushiya, Daniel Ubuza ubaba wakhe ngalolu daba, kepha lo wesilisa uncoma ukuthi ashiye okwedlule. Kodwa-ke, isexwayiso sikaRomualdo sandisa kuphela ukungaqiniseki kwendlalifa yakhe, ngubani akuthathi isikhathi eside ukunyamalala. Ngaleyo ndlela, USofia uqala usesho olusheshayo ngaphesheya kwengxenye yeYurophu ukuthola kuphi futhi ikakhulukazi kungani i- umyeni akasekho.
EParis badedela ukubonakaliswa kwe ubizile Kwangathi isiFulentshi - mhlawumbe - isiteleka esikhulu kunazo zonke esake sabonwa eNtshonalanga Yurophu. Ngaleso sikhathi, incwadi ichaza ngokuningiliziwe umlando we lonke uhlaka lwezenhlalo nezepolitiki ngaleso sikhathi, hhayi kuphela endaweni yaseGallic, ikakhulukazi eBerlin ehlukaniswe ngodonga nasekupheleni-kweFranco Madrid.
Izinto zokwakha uzungu ngenxa yokubandakanyeka kwe-KGB ne-Stasi zengeza ekusolweni kwenethiwekhi esivele iyinkimbinkimbi. Ngokufanayo, izinsizakalo zezobunhloli ezisebenzela umbuso kaFranco zibambe iqhaza elikhulu. Konke lokhu kugcwaliswa ngokuphelele ukuzilibazisa okuhle kukaPaloma Sánchez-Garnica kwezilungiselelo zomlando.
Okunye kokufaneleka okukhulu kombhali waseSpain kulele ekwakhiweni kwezinhlamvu zakhe. Kungaphezulu, ukumelwa kwama-protagonists kunokujula kwengqondo komuntu wangempela. Ngenxa yalokho, umfundi ubheka njengokwethembeka imizwa kaSofia noDaniel, kanye nokuhlupheka, ukwesaba, ubuhle kanye nokukhubazeka kwawo wonke amalungu endaba.
Ekupheleni, ubuqili (okunengqondo) nokusola kozungu bezinhloli kuhlangana ngokukhululeka ngokuziphendukela kwemvelo okuhambayo kothando lwezithandani zakwaSandoval. Ngokuvala, Ukusola kukaSofia ishiya umyalezo womhlaba wonke: uma umuntu ephila ecindezelwe ngaphansi kombuso wobushiqela (UDaniel eFranco, eKlaus eMpumalanga Jalimane) ngeke akwazi ukuhlala nenhlalakahle yangempela.
Yazalwa kanjani indaba kaSofia
Okuhlangenwe nakho kwakho siqu
USánchez-Garnica utshele iphephandaba ABC ngo-2019 owafakaza kumuntu wokuqala yenqubo yonke yenguquko maqondana nentando yeningi abe ngemuva kokushona kukaFranco. Mayelana nalokhu, uthe: “Asivukanga ngakusasa siyizwe elibuswa ngentando yeningi, kudinge umzamo omkhulu nentambo enkulu yezintambo. Ekugcineni, noMthethosisekelo, safinyelela esivumelwaneni sokuqhubekela phambili ”.
Ngokufanayo, umbhali waseSpain wayeseBerlin ngosuku olwandulela ukudilizwa kwalabo okuthiwa I-Antifaschistischer Schutzwall —Udonga Lokuvikelwa Kwama-Antifascist— yi-GDR. Ngokunjalo, enhlokodolobha yaseJalimane wazibonela izindawo eziphikisayo ezinhlangothini zombili ngokwakhiwa okungokomfanekiso kweMpi Yomshoshaphansi, i USchandmauer noma iWall of Shame, njengoba yabhapathizwa ohlangothini olusentshonalanga.
Ngemuva kokukhishwa kwe- Ukusola kukaSofia, umbhali wase-Iberia wathi ukhuthazwe ngababhali abahlukahlukene bakazwelonke nabangaphandle ngesikhathi sokubhala. Phakathi kwemibhalo okukhulunywa ngayo kukhona UColonel Chabert (1832) nguHonoré de Balzac, Unkosikazi kaMartin Guerre (1941) nguJanet Lewis no UBerta Isla (2017) kusuka ku- UJavier Marias.
Impela, uSánchez-Garnica ukwazile ukuxuba ezinye zezitayela zamanoveli amathathu ashiwo. Lezi zici ziyancomeka nge-akhawunti yayo yomuntu wesithathu ehlanganisa ngokwemvelo imicimbi edlule neyamanje. Umphumela uyincwadi amakhasi angaphezu kwamakhulu ayisithupha ngamandla okuxhuma kubafundi kusuka kulayini wokuqala kuye ekugcineni.
Mayelana nomlobi, uPaloma Sánchez-Garnica
Ngaphambi kokuba abe ngumbhali ngokusemthethweni, uPaloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962) wayesebenza njengommeli, njengoba eneziqu ze-Law, Geography and History. Suqale ukubhala ngo-2006 nge I-arcanum enkulu. Khona-ke, ngo-2009 yaqala ukubonwa ezweni lakhe ngiyabonga ukushicilelwa ngempumelelo kwe- Umoya wasempumalanga.
Bese bevela Umphefumulo wamatshe (2010), Amanxeba amathathu (2012) futhi I-sonata yokuthula (2014). Ukuzinikezela okucacile kweza nokwethulwa kwe- Inkumbulo yami inamandla kunokukhohlwa kwakho, owine Umklomelo Wenoveli kaFernando Lara ka-2016. Ngalesi sizathu, umbhali wazama ukulungiselela kahle ukugcina umgoqo uphezulu encwadini yakhe elandelayo: Ukusola kukaSofia.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Ukusola kukaSofia
Imishwana ekhethiwe engama-30 mayelana namanoveli